cold - Synonyms of cold | Antonyms of cold | Definition of cold | Example of cold | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for cold
Top 30 analogous words or synonyms for cold
ဆေးဝါးဗေဒ 148. Cold Tablets, Alerid, No-cold, M-cold (Cetirizine dihydrochloride5mg, Phenylpropanolamine 25 mg, Paracetamol 500 mg) အအေးမိ၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊
ဆေးဝါးဗေဒ 295. Levocetirizine (Lezen-Cold) = Antihistamine
တင်ထွေး ၂၄။ သွေးအေးအေးဖြင့် (In cold blood by Truman Capota)
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ The origins of the Saturn V rocket begin with the US government choosing Wernher von Braun to be one of about seven hundred German scientists in Operation Paperclip,aprogram created by President Truman in September 1946. It was intended to bring these scientists and their expertise to the United States, thereby giving America an edge in the Cold War.
Breaking Benjamin Breaking Benjamin သည်၂၀၀၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထုတ်လုပ်သူ David Bendeth နှင့် "We Are Not Alone" album အတွက် စတူဒီယိုသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ Burnley သည် The Smashing Pumpkins မှ Billy Corgan နှင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် Rain၊ Forget it နှင့် follow သီချင်းများကို ရေးစပ်ခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်များသော်လည်း Burnley ၏အလုပ်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဟု ခံစားရသည်။ Album ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်၂၉ တွင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ပထမအပတ်အတောအတွင်းတွင် ၄၈၀၀၀ ခန့်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Billboard 200 တွင် နံပါတ်၂၀ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုနှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် platinum ဆုရရှိခဲ့သည်။ ထူးခြားသည့် သီချင်းများမှာ So Cold နှင့် Sooner or Later တို့ဖြစ်ပြီး Mainstream Rock သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ် ၂နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ So Cold သီချင်းသည် ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၅တွင် ပလက်တီနမ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ MTV မှ Jon Wiederghorn သည် စီးပွားရေးအရ ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Evanescence, Seether နှင့် Three Day Grace တို့နှင့်အတူ ခရီးစဉ်များလှည့်ပတ်ခဲ့သည်။